ကလိုစေးထူး: ပြစ်မှုကြွေးကို ... ???
ယောက်ျားလေးတွေအနေနဲ့ ဆိုးတဲ့ မိုက်တဲ့အခါ
အတန်းလို့ ခေါ်လေ့ရှိတဲ့ ပြည့်တန်ဆာရပ်ကွက်လိုမျိုးကို
Jun 12, 2007, 10:52:00 PM
ကိုကြီးက ဦးသွားပြန်ပြီကွာ...ညီမလေးက လောပိတက ရဲဘက်တွေအကြောင်းရေးမလို့ကို...ခုတော့ ကော်ပီရိုက်ဖြစ်တော့မှာပဲ...;))
Jun 13, 2007, 7:04:00 AM
ပေါ်တာတွေအကြောင်းဖတ်ရတာ ၀မ်းနည်းစရာပဲ ။
Jun 13, 2007, 7:57:00 AM
ဒီစာကို ဖတ်ပြီး တော်တော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။
“ခွေးကမှ ချက်စားလို့ရသေးတယ် …” လို့ ပြောတဲ့စကား ဖတ်ရတာ ရင်ထဲနင့် လိုက်တာ။
မနုတ္တဿဘာဝေါ ဒုလ္လဘော ဆိုတဲ့စကား ဒီနေရာမှာ မှားနေသလိုပါပဲလား။
ပြုခဲ့မိတဲ့ အပြစ်နဲ့ မတန်အောင် ပြစ်မှုကြွေးကို ဆပ်နေကြရတဲ့ ချွေးတွေ … ဆပ်ခဲ့ကြရတဲ့ သွေးတွေက … မြောက်မြားစွာ …. ။
အပြစ်မရှိဘဲ ၀ဋ်ကြွေးတခုလို ဆပ်နေကြရတဲ့ … ဆပ်ခဲ့ကြရတဲ့ … ချွေးစက်ပေါင်း သွေးစက်ပေါင်း လည်း မြောက်မြားစွာ …
စီး ဆင်း နေ ဆဲ … …. ….
ဘယ်တော့များမှ ရပ်ပါ့မလဲ … ။
Jun 13, 2007, 10:01:00 AM
အခုလို ထောက်ပြ ပြောဆိုပေးတာ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော် ဒီစာကို စာစောင် တခုခုကို ပို့ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ အဲဒီလို ပို့တဲ့ အခါ အခု ဆရာမ ထောက်ပြပေးတဲ့ အတိုင်း လျော်ညီတဲ့ နိဒါန်းတခုခု ပြင်ရေးပြီးမှ ပို့ပါမယ်။ အခုကတော့ ဆရာမ ထောက်ပြပြောဆိုပေးထားတဲ့ ကျနော့်လိုအပ်ချက်ကို ထင်သာမြင်သာအောင် ဒီအတိုင်းထားခွင့်ပြုပါ။ :)
S0wha1 ညီမလေးလဲ ရေးလို့ရတာပဲကွ။ နေရာချင်းမှ မတူတာ အဖြစ်အပျက်ခြင်းလဲ ကွဲပြားမှု ရှိမှာပါ။ ဒါနဲ့.. ကော်ပီရိုက်ဆိုတာ ထည့်မပြောနဲ့လို့ ပြောထားတာ ဘယ်သူလဲကွ။ :P
ဂျစ်တူး.. ဟုတ်တယ်ညီမရေ၊ ၀မ်းနည်းရုံကလွဲပြီး ဘာမှ မတတ်နိုင်တာထက်စာရင် လက်လှမ်းမီသလောက် ရေးရင် ကောင်းမလားလို့ ဒီပို့စ်ကို ရေးမိတာ။
မမေ.. ဟုတ်တယ်..၊ အဲဒီစကားကတော့ အတော်ကို ဆိုးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ဘာမှ မတတ်နိုင်ခဲ့ကြဘူး။ အခုလဲ မတတ်နိုင်သေးဘူးလို့ ပြောလို့ရနေတုန်းပဲ..။
Jun 13, 2007, 8:21:00 PM
ခုမှပဲ ကျွန်တော်လည်းအချိန်ပေးဖတ်နိုင်တော့တယ်။ စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ.သီတင်းတွေကြားရတာ... စစ်သားကလေးတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ၊ သူတို့က မရှိဘူးအော်နေတာ၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် မျက်စိနှင့်တွေ့ခဲ့ရတာ..ကျွန်တော် မထင်မှတ်ပဲ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့၊ အိန္ဒိယ သံရုံးရှေ့မှာ ကျွန်တော် သူငယ်ချင်း စစ်ဝတ်စုံနှင့် သံရုံးကို လှည့်ကင်းကျတယ်ထင်တယ်။ ပုံစံကတော့ ကျွန်တော်တို့ အတန်းထဲမှာ သူ့ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၄နှစ်က မြင်ခဲ့တဲ့ ပုံတော့မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့သူမျက်နှာကို ကျွန်တော် မှတ်မိနေသေးတယ်။ သူကတော့ သိပ်မမှတ်မိတော့တဲ့ပုံ။ သေနပ်ကြီးက လူနှင့် မလွယ်အောင် လွယ်ထားရပြီး၊ အဟာရမပြည့်ဝတဲ့ ပုံ။ ကျွန်တော်သူ့ကို ကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ဒီလောက်တောင် ဘာကြောင့် တုန်းရသလဲဟု ထင်မိသည်။ ပြောမိခဲ့သေးသည်၊ မင်းဘာလို့ စစ်တပ်ထဲ ၀င်တာလဲ။ မင်းမို့လိုဝင်တယ်ဟု ၍ ..
Jun 16, 2007, 3:58:00 PM